Nicanor Parra. Chirangaridzo chekuzvarwa kwake pamwe nedzimwe nhetembo | Zvazvino Zvinyorwa
Nicanor Parra. Chirangaridzo chekuzvarwa kwake pamwe nedzimwe nhetembo
Nikanor Parra aive mudetembi, murondedzeri wenhau, nyanzvi yemasvomhu uye yefizikisi uye Akazvarwa pazuva rakafanana nanhasi muna 1914 muChile. Basa rake rinotaridzika kuve rave iro musiki weantipoetry, chimiro chenhetembo rupturisma icho chakaitika kunyanya muma40s muLatin America. Nhasi ndinomuyeuka achiverenga zvimwe zvake nhetembo.
1 Nicanor Parra - Inoshanda uye Mubairo
2 Dzimwe nhetembo
2.3 Tsamba kumunhu wausingazive
2.4 Nhetembo dzakaguma neni
2.5 Nhetembo nhatu
2.6 Iyo Fortune
2.7 Zita rinochinja
Nicanor Parra - Inoshanda uye Mubairo
Kujekesa mamwe mazita ari Ndima dzekugara, Basa gobvu, Nhetembo uye antipoems, Mharidzo uye mharidzo dzaKristu weElqui, Ecopoems, Artifacts, Mazambiringa mashizha. Zvimwe zvakagadziridzwa kuita nhanho uye audiovisual zvigadzirwa.
Akapihwa mibairo yakakosha kwazvo yemabhuku pakati payo inoverengeka Chilean National Prize yeMabhuku muna 1969, Mubayiro Reina Sofía weIbero -America Nhetembo muna 2001, iyo Pablo Neruda Ibero-American Nhetembo Prize kana iyo Cervantes Mubayiro in 2011.
Nicanor Parra aive ne simba guru muzvinyorwa zvese zveAmerican American. Akafira mu2018 yezvisikwa zvikonzero uye na 103 makore.
Handitenderi chero munhu kuti andiudze
Ndiani asinganzwisisi antipoems
Wese munhu anofanira kuseka zvinonzwika.
Ndosaka ndichityora musoro
Kusvika mweya wemuverengi.
Reka kubvunza mibvunzo.
Imwe neimwe inokwenya nezvipikiri zvavo.
Uyezve chinhu chimwe:
Handina kana dambudziko
Mukuzviisa mune yehembe gumi neimwe.
Kwehafu yezana ramakore
uye ndakagara mukati mangu roller roller yangu.
Huya kumusoro, kana uchida.
Ehe handipindure kana vakadzika
kudira ropa kubva mumuromo nemumhino.
Tsamba kumunhu wausingazive
Kana makore achifamba, kana achifamba
makore nemhepo zvakachera gomba
pakati pemweya wako newangu; kana makore achifamba
Uye ini ndiri munhu aida
munhu akamira kwekanguva pamberi pemiromo yako,
murombo aneta nekufamba muminda,
Unenge uripi Kupi
uchave, o mwanasikana wekutsvoda kwangu!
Nhetembo dzakaguma neni
Handitaure kupedzisa chero chinhu
Handina fungidziro nezvazvo
Ini ndaida kuramba ndichiita nhetembo
Asi kurudziro yakapera.
Nhetembo akazvibata zvakanaka
Ndakaita zvakaipa zvakaipa.
Chii chandinowana nekutaura
Pavanoziva kuti ndini honzeri.
Zvakanaka kundipfuudza ndiri benzi!
Ndakaita zvakaipa zvinotyisa
Nhetembo dzakaguma neni.
Handina chandakasara kuti nditaure
Zvese zvandaifanira kutaura
Zvikanzi handizivi kangani.
Ndabvunza handizive kangani
asi hapana anopindura mibvunzo yangu.
Izvo zvinodikanwa kwazvo
Rega gomba rakadzikadzika ripindure kamwechete
Nekuti kwasara nguva shoma.
Chinhu chimwe chete chiri pachena:
Rega nyama izadze nehonye.
Fortune haidi avo vanochida:
Iri diki bay bay
Yasvika makore anonoka.
Kuita kuti ndide
Kune mukadzi ane miromo yepepuru
Uye vanondipa iko zvino ndachembera.
Zvino izvo hazvina zvazvinobatsira kwandiri.
Vanozvikanda kumeso kwangu
Kune vanoda mavara akanaka
Ndinotumira zvido zvangu
Ndiri kuzotumidza mamwe mazita zvinhu.
Nzvimbo yangu ndeiyi:
Nyanduri haachengete shoko rake
Ukasachinja mazita ezvinhu.
Nechikonzero chei icho zuva
Rinofanira kuramba richinzi zuva here?
Ini ndinokumbira kuti izonzi Micifuz
Iyo ine makumi mana-ligi mabhutsu!
Shangu dzangu dzinoratidzika semabhokisi here?
Ziva izvozvo kubva nhasi zvichienda mberi
Shangu dzinonzi mabhokisi.
Kutaurirana, kusaina uye kushambadza
Kuti shangu dzakatumidzwazve zita:
Kubva zvino vava kunzi mabhokisi.
Zvakanaka husiku hwakareba
Nyanduri wese anozvikoshesa
Iwe unofanirwa kuve uine rako duramazwi
Uye ndisati ndakanganwa
Mwari pachake anofanira kutumidzwa zita
Rega munhu wese audeidze zvavanoda:
Icho chinetso chega.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Nicanor Parra. Chirangaridzo chekuzvarwa kwake pamwe nedzimwe nhetembo